Shina lozisim-baravarankely misy lavarangana Ares80-1 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Balobika Glass dia ampahany manan-danja amin'ny ankamaroan'ny balconies. Mampitombo ny fandehanan'ny hazavana izy ireo ankoatra ny fanaovana ny boorety ho lasa maoderina sy mandray tsara. Tahaka ny fitaterana fitaratra sy ny fitaratra an'ny vera, ny vera misy lavarangana dia matetika vita amin'ny fitaovana manokana ary mampiasa fomba voafaritra mba hamokatra fitaratra azo antoka. Mila soloina ny fitaratra mandritra ny lozam-pifamoivoizana, ny fikojakojana ary koa mandritra ny famaranana ny trano.
Varavarankely fitaratra varavarankely-Ares80-1
Varavarankely fitaratra varavarankely
5mm + 9A + 5mm sy fitaratra 8mm
Misy ny mombamomba ny tohatra miendrika tohatra mba hialana amin'ny rano sy ny vovoka ho an'ny varavarankely fitaratra
Misy haingam-pandeha sy fomba fitondra lehibe amin'ny fampiasana varavarankely fitaratra varavarankely. Namboarina tamina fahatanterahana tanteraka, ny fikandrana fitaratra varavarankelyAres80-1 dia mamela ny rivotra madio ao an-tranonao amin'ny alàlan'ny fikosoham-bava haingana fotsiny. Ny efitrano dia saika voaporofo tsara ary mitokana amin'ny loto ivelany raha mikatona.
Ny varavarankely fitaratra varavarankelyAres80-1 dia mampiditra lambanina roa na mihoatra marindrano apetraka eo amin'ilay lalana miaraka amin'ireo mpanodina mba hamindra na hitifitra ankitsirano. Miaraka amin'ny famerenam-bavony tanteraka amin'ny sisiny iray mankany amin'ny sisiny iray, ny varavarankely dia manolotra habaka fanamafisana lehibe. Na eo am-baravaranao, efitrano fandraisam-bahiny na efitrano lehibe ianao, ny varavarankely fitaratra varavarankelyAres80-1can mifanaraka tsara ary mampiditra ny fomba manara-penitra ho an'ny trano misy famirapiratra.
INDRINDRA ARAKA NY FIVAVAHANA sy ny zavatra mahasoa ao amin'ny fikandrana fantsom-baravarankelyAres80-1:
1. Azo alaina amin'ny loko sy volavola isan-karazany
2. Famokarana namboarina ho an'ny fisokafana goavambe
3. Ny hafanana, ny feo ary ny vovoka maneno miaraka amin'ny tombo-kase mifono rivotra
4. Rafitra fanalahidy mihidy amin'ny fangatahana
5. safidy roa sy vera solo
6. Ranon-tsoavaly sy sill mba hialana amin'ny tondradrano
Previous: Fantsom-baravarankely miforitsoratry ny aluminiana Ares75FT
Manaraka: Ny varavarankely lozotra miaraka amin'ny moka moka Ares80-1
Varavarankely fitaratra Aluminum
Varavarankely mipetaka amin'ny alàlan'ny Net
Ny varavarankely lozotra miaraka amin'ny moka moka Ares80-1